OWASP Top 10 sehatra hitsikerana ny fampiharana fampiharana - ITS Tech School
OWASP Top 10 toerana manan-kery ho an'ny fiarovana an-tserasera
OWASP - na Open Web Application Security Project - dia vondron'orinasa tsy mandray tombony izay rafitra mahazatra sy fitsipika tsara indrindra ho an'ny drafitra, famoronana, famoronana, ary fitazonana fampiasa amin'ny tranokala azo antoka. OWASP Top 10 dia tetikasa iray izay miverimberina, dia mamoaka ny sisa amin'ny top 10 zavatra hiatrehana, ao anatin'ny fivoaran'ny fiainana an-davan'andro mba hiantohana fa azo antoka ny fampiasana tranonkala amin'ny voalohany.
Ny OWASP Top Ten Controls Proactive 2016 dia manolotra ny manodidina ny Top 10 Critical Areas ho an'ny fampiharana fampiharana izay tsy maintsy heverina ho an'ny tetikasa fanatsarana ny vokatra. Ny programa fampiharana izay tsy azo antoka dia tsy afa-manoatra amin'ny fanafihana ivelany. Ny fanatanterahana ny filaminana an-tserasera dia tena ilaina amin'ny tetikasam-pandrosoana sasany, ary ny vondron'olona OWASP dia manampy ny injeniera hahazo tombony amin'ny hafa, ka tokony ho fantany ny loza sy ny vulnerabilities.
Ireto misy sombin-doko voafantina amin'ny fangatahana ny dikan'ny ampahany amin'ny toro-hevitra izay tsy maintsy dinihan'ny injeniera rehefa manao fampiharana:
Rafitra fanaraha-maso andrana
Hamarino ny fiarovana aloha be ary matetika araka izay tratra
Fanamarinana ny fidirana rehetra
Ny fampiharana ny fanamarinana sy ny fanamarinana ny maha-izy azy
Ampiasao ny Libraries Security sy Frameworks
Fahavitan-tsoa sy fahadisoana diso
Raha mandinika ny tsirairay amin'ireny fiheverana ireny, ny injenieran'ny tranonkala dia tsy maintsy mitandrina tsara ary manohy manohy ny fananganana ny vokatr'izy ireo. OWASP Certification Avy amin'ny fifantohana amin'ny fisorohana no ahafahana mametraka ny làlana ho an'ny injeniera hanao safidy tsara indrindra ho fiarovana ny fiarovana ny vokatra vokariny
Toro-làlana ho an'ny mpikaroka EC-Council: Tatitra iray
Ny fototry ny fampandrosoana amin'ny Microsoft Dynamics AX 7